Siria: 25 No Maty Tao Amin’ny Fonjan’i Sednaya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2018 2:15 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Deutsch, Italiano, English
Nanambara ny Syrian Human Rights Committee (SHRC) (Komity Syriana Misahana ny zon'olombelona) fa ny nisy fandripahana olona tamin'ny 5 jolay 2008 tao amin'ny fonja miaramilan'i Sadnaya, ao andrefan'i Damas. Fara-fahakeliny, gadra 25 no novonoin'ny mpitandro filaminana araka ny voalazan'ny SHREC, izay naharay ireo antso tamin'ny finday avy ao anatin'ny fonja nandritra ilay fandripahana. Tamin'ny 7 ora maraina nikomy hanohitra ireo fepetra tsy mendrika amin'ny famonjana azy ireo gadra. Nanohitra an'ireo gadra tsy mitam-piadiana, tamin'ny alalan'ny tifitra, ny tafika siriana, niteraka ny fahabetsahan'ireo maty sy ireo naratra.
Namoaka ny fanambaràn‘ireo tomponandraikitra ny Masoivohom-baovao siriana SANA, milaza fa “efa miverina ny filaminana” taorian'ireo “fandripahana” nataon'ireo “mpampihorohoro” sy ireo “mpanao an-tendrony”.
Les blogueurs syriens ainsi que la diaspora ont réagi à cette tragédie. Ahmad (Arabe), qui blogue en Syrie, publie une liste de quelques noms de détenus syriens tués par la police syrienne : ………….Nihetsika manoloana an'io loza io ireo siriana blaogera sy ny zanaka ampielezana. Ahmad (Arabo), izay manoratra blaogy ao Siria, namoaka lisitra iray misy ny anaran'ireo voafonja siriana novonoin'ny mpitandro filaminana siriana.
Fangatahana fanatsarana an'ireo fepetra tokony hiainana, ireo trano famonjana feno loatra, ary ny fanoherana ireo karazana fampijaliana izay miantraika amin'ireo “silamo” voafonja, fotsiny no nitranga tao … Noho io, nigadra tao amin'ny fonjan'i Sednaya ny blaogera siriana Tariq Baiasi. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba hiaro azy.”.
Blaogera iray hafa, Gottfried Stutz [amin'ny fiteny anglisy] mangataka amin'ny fitondrana siriana mba hampitsahatra ny fitifirana an'ireo voafonja tsy mitam-piadiana ary mangataka ny fanafahana an'ireo gadra politika rehetra.
Blaogera siriana iray hafa, Disaffection [amin'ny fiteny anglisy] izay vao avy nampidirina tao amin'ilay fanomndronana blaogy siriana Syria Planet, dia nanokana ny tsikerany voalohany ho amin'ilay fandripahana: “Ny vy tsy mikitrana irery” Manazava izy:
Fehezinay miaraka amin'ilay siriana blaogera vaovao, izay miblaogy tsy mitonona anarana, Jabz. ity fitetezana blaogy ity. Manome tsiny ny fitondrana izy noho ireo “tsy fahombiazany” tsy misy fitsaharana:
“Zavatra mampihoron-koditra ireo, henatra ho an'ny governemanta. Tsy vao voalohany izao ny governemanta no tsy nahomby tamin'ny zavatra izay nokasainy hatao, tamin'ity taona ity. Tamin'ny fiandohan'ny taona, efa nisy sahady ireo fifandonana teo amin'ireo sekta roa “Hama“.
Manamarika ny tsingerintaona faha-27 ny vonomoka tao amin'ny fonjan'i Tadmur (Palmyre), ity famonoana faharoa ity (tsindrio eto mba ho fanampim-baovao).